PUMA Sneaker နဲ့ M.A.C တို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုက Fashion Style တွေကိုတစ်ခေတ်ဆန်းစေတော့မှာလား? – FemaleWear.net
PUMA Sneaker နဲ့ M.A.C တို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုက Fashion Style တွေကိုတစ်ခေတ်ဆန်းစေတော့မှာလား?
သင်ဟာ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်နဲ့ မျက်လုံး Eye Shadow အရောင်လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်ချယ်သဘူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်နဲ့ အဝတ်အစားအရောင်လိုက်ဖက်အောင် ဝတ်စားဆင်ယင်ဘူးပါသလား။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒါတွေကိုမေ့လိုက်ပြီး အရင်ကနဲ့မတူအောင် ဆင်ယင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်လာပါပြီ။
မကြာသေးခင်ကမှ PUMA Sneaker နဲ့ M.A.C cosmetic တို့ပူးပေါင်းပြီး Fashion Trend အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ စတင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းမှုဟာ PUMA ကုမ္ပဏီရဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ M.A.C cosmetic က Puma နဲ့အခုလိုပူးပေါင်းမှုကို နိုဝင်ဘာလမှာကတည်းက Teaser တစ်ခုနဲ့ Instagram မှာကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုလို PUMA နဲ့ M.A.C cosmestic တို့ပူးပေါင်းမှုအရမကြာခင်မှာ M.A.C ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်သုံးရောင်အတိုင်း Sneaker ဖိနပ်ကို အရောင်သုံးမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်သွားတော့မှာပါ။ ဒီအရောင်သုံးရောင်ကတော့ M.A.C နှုတ်ခမ်းနီရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးအရောင်တွေဖြစ်တဲ့ coral-red Lady Danger, peach-beige Crème d’Nude, and deep burgundy Sin ဆိုတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖိနပ်လျှာမှာ M.A.C ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကိုရေးထိုးထားပါတယ်။
အထူးဒီဇိုင်းဆင်ထားတဲ့ ဘူးလေးတွေနဲ့ ထည့်ပေးမယ့် ဒီဖိနပ်တွေကို လာမယ့်မေလ 17 ရက်နေ့မှာ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၉၀ ဖြစ်တာကြောင့် လက်လှမ်းမီတဲ့ စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ အမေရိကန်ကဝယ်ယူသူတွေအတွက်ပဲရောင်းချမှာဖြစ်သလို အမေရိကန်မှာတောင် PUMA website နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာပဲရောင်းချပေးမှာပါ။ ဒီဖိနပ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဆိုးနိုင်မယ့် M.A.C နှုတ်ခမ်းနီရဲ့ စျေးနှုန်းကတော့ ၁၈.၅၀ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ဒီပူးပေါင်းမှုအရထွက်ရှိလာမယ့် PUMA sneaker တွေကို USA မဟုတ်တဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချဖို့ရှိမလားဆိုတာတော့ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဖက်ရှင်နဲ့ အလှကုန်ကြိုက်တဲ့ ပျိုမေတွေကတော့ မျှော်လင့်ရင်ခုန်နေမှာအသေအချာပါပဲ။
H&M နဲ့ collaboration လုပ်တော့မယ့် Moschino
Coachella 2018 မှာတွေ့ရတဲ့ Rihanna ရဲ့ ဖက်ရှင် (၄) မျိုး